Nagu saabsan - El Centro de la Raza
Sida urur ku dhisan bulshada Latino ee Gobolka Washington, waa hadafka El Centro de la Raza (The Center for People of All Races) si loo dhiso Bulshada la jecel yahay iyada oo la mideynayo dhammaan qaybaha isirka iyo dhaqaalaha; in la abaabulo, la xoojiyo, lana difaaco xuquuqda aasaasiga ah ee dadkayaga ugu nugul oo la yaso; iyo inuu miyir -qabka, caddaaladda, sharafta, iyo sinnaanta u keeno dhammaan dadyowga adduunka.
Waxaan qiyaasnaa adduun ka xor ah dulmi ku salaysan faqri, cunsuriyad, jinsi, hanuuninta galmada, iyo takoor nooc kasta ha ahaadee xad u yeelashada si siman u helidda ilaha hubiya nolol caafimaad leh oo wax soo saar leh nabad, jacayl iyo wada noolaansho dhammaan dadyowga iyo jiilashayada mustaqbalka .
Kuwa soo socdaa waa laba iyo toban Mabaadi 'oo El Centro de la Raza “Familia” qaatay dayrtii 1976, afar sano jiritaankeenna. Waxay ahayd daqiiqad qeexaysa taariikhda ururkeenna waayo waxay caddeysay waxa naga go'an inaan noqonno urur cusub oo hal -abuur leh oo ka dhashay halgankii rabshadaha ahaa ee adduunka oo dhan si aan u abuurno adduun ka wanaagsan.
Nuxur ahaan laba -iyo -tobankan mabda 'waxay noqonayaan “dastuurkeenna” waxayna aad muhiim ugu ahaayeen inay nagu hoggaamiyaan rafaadka iyo rayn -raynta 37 -kii sannadood. Waxaa la korsaday intii lagu jiray shirkii gobolka oo dhan ee wiigga, ardayda, beeraleyda, aqoonyahannada, haweenka, shaqo la'aanta iyo qabanqaabiyeyaasha ka socda Chicano/Latino, Madow, Hindi, Aasiya iyo bulshooyinka caddaanka ah.
“Gracias” gaar ah ayaa loo hayaa hoggaanka bulshada Chile ee musaafuriska ah si cad oo aan caadi ahayn iyo bisayl siyaasadeed oo ka muuqda mabaadi’dan:
1. In la wadaago, la bixiyo, loona qaybiyo adeegyadayada, kheyraadka, aqoonta iyo xirfadaha ka -qaybgalayaasheena, bulshada, booqdayaasha iyo qoyska bani -aadamka oo leh dhammaan sharafta ku habboon baahida shaqsiyeedkooda iyo xaaladdooda. Si taas loo sameeyo si hal -abuur leh oo diirran, dareen dhaqameed, caddaalad, xamaasad, naxariis, daacadnimo iyo yididiilo dhammaan dhinacyada shaqada.
2. In loo halgamo sidii loo tirtiri lahaa midabtakoorka, jinsiga, da'da iyo hababka dhaqaale ee takoorka ee wax u dhimaya kartida aadanaha ee bulshadeena.
3. In la taageero inta badan dadka dalkan ku nool; ie, dhammaan shaqaalaha - oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidnayn shaqaalaha beeraha, shaqaalaha warshadda, shaqaalaha adeegga iyo shaqaalaha xafiiska halganka ay ugu jiraan xuquuqda gorgortanka wadajirka ah, badbaadada, faa'iidooyinka iyo mushaharka iyo mushaharka kaliya.
4. Si kor loogu qaado dib -u -qabashada dhaqanka, luqadda iyo ixtiraamka bulshada Chicano/ Mexicano/ Latino oo mudnaan u leh dhammaan shaqooyinkayaga, iyada oo aan lagu dhicin qowmiyadda; in la xoojiyo oo la caawiyo halganka dib loogu qabsado dhaqammada bulshooyinka walaalaheen ah.
5. Si kor loogu qaado xiriir shaqo oo xooggan oo togan oo lala yeesho bulshooyinka kale ee laga tirada badan yahay dhammaan dhinacyada shaqada, adeegga, hawlaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada.
6. Si loo siiyo goob shaqo oo wada jir ah, caafimaad qabta, ammaan ah oo saaxiibtinimo leh xubnaha bulshadeena iyo dhammaan ka -qaybgalayaasheena saamaynteena.
7. Si loola dagaallamo dhammaan noocyada midab -takoorka, jinsiga, shaqsi -nimada, da'da, iyo rabshadaha shaqadayada iyo xaruntayada bulshada.
8. In loo halgamo sidii loo abuuri lahaa barnaamijyo iyo adeegyo ay tahay in ay bulsho siiso horumarka bulshadeena iyo dadkeeda.
9. In loo halgamo jawi nadiif ah, ammaan ah, oo nukliyeer ah oo dadkeenna iyo jiilalka soo socda ah. Si aad uga shaqayso adeegsiga macquulka ah ee kheyraadka dabiiciga ah ee danaha ilaalinta Dhulka Hooyo iyo horumarka nabadeed ee aadanaha.
10. In la taageero xuquuqda aayo-ka-tashiga Dadka Asaliga ah, Afrikaan Ameerika, Aasiyaan Ameerika, iyo Laatiin, iyo sidoo kale walaalaheena ku nool waddamada soo koraya ee adduunka. Si kor loogu qaado horumarinta siyaasadda arrimaha dibedda ee dawladdeenna oo ku dhaqanta mabaadi'da gobannimada, caddaaladda, dimuqraadiyadda, go'aan-qaadashada, ixtiraamka caalamiga ah, iyo tan ugu horreysa, nabad leh sharaf leh.
11. In la xoojiyo qoyska oo ah aasaaska aasaasiga ah ee bulshada kaas oo ka qayb qaata horumarka bulshada guud ahaan. Si loo caawiyo midba midka kale iyo bulshadeenu u gutaan doorarka waalidnimo, isqaba, walaalo, walaalo iyo carruur, oo ku salaysan sinnaanta buuxda ee ragga iyo dumarka. In la ixtiraamo lana aqoonsado xuquuqda carruurta oo ah xubno buuxa oo mudnaan u leh bulshadeena. Si loo xoojiyo xiriirka qoyska ee fidsan. In la horumariyo barnaamijyo fuliya waajibaadkayaga ka mid ah xubnaha qoyska ee bulshada weyn si aan ugu barbaarinno jiilalka mustaqbalka leh aragti cad oo na hoggaamisa si aan uga soo kabanno ruuxa dagaallada. In loo halgamo sidii loo hubin lahaa in nolosha qoyska la quudiyo lana ixtiraamo. Si loo ilaaliyo xuquuqda haweenka iyo carruurta si ay ugu noolaadaan noloshooda iyagoo xor ka ah nooc kasta oo xadgudub ah: jir ahaan, nafsiyan, galmo.
12. In loo halgamo jiritaanka aadanaha oo sharaf leh dhammaan dadka ku jira bulshadeena; daryeelka caafimaadka, guriyeynta, iyo shaqaalaynta buuxda ee fursadda waxbarasho ee loo siman yahay, geeddi -socodka dimuqraadiyadda ee arrimaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada iyo nidaam dhaqaale oo siman oo meesha ka saaraya kala -duwanaanshihii weynaa ee dakhliga oo sabab u ahaa saboolnimada iyo duudsiga.
Buug -yaraha Ururka
Foomamka IRS 990:
Xeerarka El Centro de la Raza:
Xeerka Anshaxa iyo Siyaasadda Danaha Khilaafka
Siyaasadda Xog -siinta
Siyaasadda Ilaalinta Diiwaanka
Bayaanka Sinaan la'aanta ee USDA
Guddiga Agaasimayaashu waxay ka kooban yihiin 15 xubnood oo leh shuruudo guddi maamul oo soconaya saddex sano.
Continue reading "Guddiga Agaasimayaasha"
Eeg warbixinnadayada sannadlaha ah iyo liiska natiijooyinka barnaamijka.
Continue reading "Natiijooyinka & Saameynta"